Izinyathelo Ezi-12 Zempumelelo Yokumaketha Komphakathi | Martech Zone
Izinyathelo Ezi-12 Zempumelelo Yokumaketha Komphakathi
NgoMgqibelo, Septhemba 13, 2014 NgeSonto, Septhemba 14, 2014 Douglas Karr
Abantu baseBIGEYE, inkampani yezinsizakalo zokudala, banayo hlanganisa le infographic ukusiza izinkampani ekwakheni isu eliyimpumelelo lokumaketha ezokuxhum. Ngikuthanda kakhulu ukuphuma kwezinyathelo kepha ngiyazwelana nokuthi izinkampani eziningi azinazo zonke izinsiza zokubhekana nezidingo zesu elihle lomphakathi. Imbuyiselo yokwakha izethameli emphakathini nokushayela imiphumela yebhizinisi elinganisekayo imvamisa kuthatha isikhathi eside kunesineke sabaholi ngaphakathi kwenkampani.
Ucwaningo futhi wazi izithameli zakho, ukhombe izihloko nezintshisekelo ezikhuluma ngazo kakhulu emphakathini.
Khetha kuphela ukusebenzisa amanethiwekhi nezinkundla ezikhuluma kangcono kuzethameli zakho.
Yisho eyakho izinkomba zokusebenza kokhiye (Ama-KPIs). Yini ofuna ukuyifeza imizamo yakho yomphakathi? Ngabe impumelelo ibukeka kanjani ngokwemigomo engenakulinganiswa?
Bhala ibhuku lokudlala lokumaketha ezokuxhum. Ibhuku lokudlala kufanele linikeze imininingwane ngama-KPI akho, amaphrofayli ezethameli, ama-brand personas, imiqondo yomkhankaso, imicimbi yokuphromotha, imincintiswano, izingqikithi zokuqukethwe, izinyathelo zokubhekana nezinkinga, njll.
Qondanisa amalungu enkampani yakho azungeze uhlelo. Nika izibopho zokuthi ngubani othumelayo, ngubani ophendulayo, futhi ubika kanjani amamethrikhi.
Thatha imizuzu engama-30-60 ekuqaleni kwesonto ngalinye noma inyanga ukuhlela ama-tweets, okuthunyelwe kwe-Facebook, okuthunyelwe kwe-LinkedIn, izikhonkwane, noma okunye okuqukethwe kwezokuxhumana. Lokhu kungaba yimibono yoqobo, izixhumanisi zomsebenzi wakho, noma izixhumanisi kokuqukethwe kwangaphandle okungasiza noma kuthakazelise izethameli zakho.
Dala ibhange lokuqukethwe lisebenzisa ispredishithi bese uhlela izihloko zokuqukethwe, izihloko zezindaba, izixhumanisi ezihlobene, ukuhlela okufiswayo, igama lababhali, nendawo yokuvunyelwa kwabaphathi kulayini ngamunye.
Thumela okuqukethwe okufanele okuphathelene nezihloko nemicimbi efiseleka ngesikhathi. Kubalulekile ukwabelana ngemibono ngokushesha nje lapho izindaba eziqhamukayo zenzeka.
Phatha konke iziteshi zenhlalo ngokwehlukana. Akufanele uthumele umyalezo ofanayo kuzo zonke iziteshi - khumbula ukuthi izethameli zingobani ngemuva kwepulatifomu ngayinye.
Nikeza othile ukwenza njengomphenduli wenkonzo yamakhasimende ukuze uphendule kokuqukethwe okwenziwe ngumsebenzisi nokunganaki. Ungayinaki imibono nempendulo!
Hlela ukubika! Ngokuya ngezinjongo zakho, amamethrikhi wokubika angenzeka masonto onke, ngenyanga, noma kabili.
Hlaziya kabusha uhlelo lwakho njalo. Uma okuthile kuhlelo lwakho kungasebenzi, kushintshe noma okuqukethwe kokuhlola kwe-A / B ukuthola ukuthi izithameli zakho ziphendula ini kangcono.
Tags: amaphrofayili ezethameliiso elikhuluama-brand personasimiqondo yomkhankasoibhange lokuqukethweizingqikithi zokuqukethweizihloko zokuqukethweimincintiswanoizinyathelo zokuphathwa kwezinkingaInsizakalo yekhasimendeizihlokoizinkomba zokusebenza kokhiyekpisimicimbi yokuphromothaizixhumanisi ezihlobeneukuhlelaiziteshi zenhlaloinsizakalo yamakhasimende omphakathiukuqondaniswa kokuxhumana nomphakathiiziteshi zokuxhumana zenhlaloimithombo yezokuxhumana ibhange lokuqukethweezokuxhumana namakhasimendezokuxhumana KPIsamanethiwekhi ezokuxhumibhuku lokudlala lezokuxhumanaokuthunyelwe kwezokuxhumanaukubika ezinkundleni zokuxhumanaucwaningo lwezokuxhumanaukuhlela ezokuxhumizinyathelo zokuxhumana nabantuisu lokuxhumana kwezenhlaloizinyathelo
Izibalo Ezizokusiza Ukuthola Ukuthandwa Nokulandelwa Okungaphezulu Kwe-Instagram
Izinhloso Zokukhangisa ngeDijithali ze-B2014B zango-2, Izabelomali, Imisebenzi kanye Nezinselelo